Aroso ny fandraràna 'fitsangantsanganana tsy ilaina' eran-tany eropeana
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana Eoropeana » Aroso ny fandraràna 'fitsangatsanganana tsy ilaina' eran-tany eropeana
Airlines • Airport • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Aroso ny fandraràna 'fitsangatsanganana tsy ilaina' eran-tany eropeana
Filohan'ny Vaomiera eropeana Ursula von der Leyen
Ny lehiben'ny vaomiera eropeana dia nanolotra ny fandrarana ny diany 'tsy ilaina' rehetra mankany amin'ny Vondrona eropeana mandritra ny “vanim-potoana voalohany” 30 andro. Afaka nitarina 'raha ilaina' ny fandrarana, hoy izy nanampy.
“Arakaraka ny maha-kely ny dia ataontsika no ahitantsika ilay virus. Noho izany… manolo-kevitra amin'ny filoham-panjakana sy ny governemanta [aho] mba hametraka fameperana vonjimaika amin'ny dia tsy ilaina amin'ny EU, ”hoy ny filohan'ny Vaomiera Eoropeana Ursula von der Leyen dia nilaza tamin'ny Alatsinainy teo am-panaovana fanambarana Covid-19 tolo-kevitra momba ny fikojakojana ny fanjakana mpikambana rehetra.
Tsy hofongorana amin'ny fandraràna ny fivezivezena ireo mponina ao amin'ny EU sy mpikambana ao amin'ny fianakaviana teratany EU, ary koa diplaomaty sy dokotera miady amin'ny viriosy.
Ankoatr'izay, ny torolàlana dia manome soso-kevitra fa ny fitsaboana ara-pahasalamana sy ny sakafom-pifandraisana maika ao anaty bloc dia omena "làlana haingana" manokana hahazoana antoka fa afaka miatrika ny fitomboan'ny fangatahana ny fivarotana lehibe sy tobim-pahasalamana.
Tsy hisy fiatraikany amin'ny olompirenena UK ihany koa ny fandraràna ny dia, na eo aza ny fanapahan-kevitr'i London handao ny bloc.
"Ny teratany anglisy dia olom-pirenena eropeana, noho izany mazava ho azy fa tsy misy fetra ny fitsidihan'ny olom-pirenena anglisy any amin'ny kaontinanta," hoy i von der Leyen.
Ireo fepetra naroso dia antenaina horesahina - amin'ny alàlan'ny valan-dresaka an-dahatsary iray - nataon'ny filankevitra EU tamin'ny talata. Mbola ho hita eo hoe ahoana marina no hampiharana ny drafitra - raha nankatoavin'ny mpikambana blok tanteraka. Ny fandraràna ny dia toy izany dia mitaky fandraisana anjaran'ireo mpikambana mpikambana ao amin'ny Schengen Zone tsy misy visa izay tsy ao anatin'ny bloc. Mbola tsy mazava ihany koa raha milaza ny EU fa tsy ao anatin'ny Schengen ny hiditra ao aminy na tsia.
Ny tolo-kevitry ny Kaomisiona EU dia manolotra ihany koa ny famerenana ny fanaraha-maso ny sisintany anatiny misy eo amin'ny fanjakana mpikambana. Amin'ny lafiny iray amin'ny sisin-tany ihany no hanaovana ny fizahana ny fahasalamana, mba hisorohana ny olona tsy ho voasedra indroa ary amin'izany dia hampihena ny filaharana lehibe izay mitondra loza mitatao amin'ny fanaparitahana ilay virus.